Turkiga: Soomaalidu waa ineysan dayicin fursadah ay heystaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Turkiga: Soomaalidu waa ineysan dayicin fursadah ay heystaan
22nd June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Istanbul – Mareeg.com: Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga, Emrullah İşler ayaa ku boorriyay Soomaalida inay ka faa’ideysaan fursadaha badan ee ay heystaan waqtigaa.
Isagoo ka hadlayey shirka shirka qurba-joogta Soomaalida ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa tilmaamay in dowladdiisu ay kaalin muhiim ah ka cayaareyso dib-u-dhiska Soomaaliya, sidaas darteedna loo baahan yahay xoojinta xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya dowladaha Turkiga, Somaliya iyo labada shacab.
Wuxuu tilmaamay in dowladda Turkiga ay wax badan ka qabatay dib-u-dhiska, nadaafadda iyo soo nooleynta qeybo ka tirsan adeegyada bulshada ee magaalada Muqdisho, taas oo caasimadda ka dhigeysa mid wax badan ka duwan sidii ay ahayd sanadkii 2011.
Qurba-joogta Soomaalida ayuu xusay inay muhiim u yihiin howlaha ka socda Soomaaliya, isagoo tusaale u soo qaatay kaalinta ay horumarka Turkiga ku leeyihiin 6 milyan oo Turki ah oo qurbaha ku nool.
Wuxuu qurba-joogta Soomaalida ku ammaanay dowrkooda ku aaddan badbaadinta nolosha Soomaalida gudaha oo ay sanadkii u diraan 1bilyan iyo bar doollar sanadkiiba.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga, Emrullah Işler, ayaa sheegay in dowladdiisa ay hiigsaneyso in magaalo kasta oo Soomaaliya ah ay gaarto isku-filnaansho, taasi oo uu bidhaamiyay inay ku imaan karto iskaashi labada dhinac ah iyo ammaanka oo laga shaqeeyo.
Turkiga ayaa billaabay inuu caawiyo Soomaaliya sanadkii 2011, xilligaas oo colaad iyo abaar kulmay ay ku dhinteen kumannaan Soomaali ah.
Dhanka kale, shirka qurba-joogta Soomaalida ee ka socda Istanbul oo galay maalintiisi labaad ayaa waxaa maanta kala soo qaybgalay.
Kulankaan oo looga gol leeyahay Midaynta Soomaalida Boqolaalka Kun dhan ee ku nool qurbaha ayaa waxaa Marti gelisay dowladda Turkiga, iyadoo shalay ay khudbado ka jeediyeen Masuuliyiin uu kamid ahaa Wasiirka arimaha dibadda dowladda Turkiga Ahmet Davutoglu, Safiirka Turkiga u jooga dalka Soomaaliya Kamaaludiin Kani, Wasiiradii hore ee arimaha adeegga & qoyska ee Soomaaliya Drs Maryan Qaasim iyo Safiirka Soomaaliya u jooga dalka Turkiga Danjire Maxamed Sheekh Mursal.
Waxaa kasoo qayb galay ergo gaaraysa 100 qof oo isugu jiray dad Madax ka ah Hay’addo, Ururo Samafal, Madaxda Jaaliyadaha iyo dad kale oo u dhaq-dhaqaaqa Soomaalida dibadda ku nool.
Wasiiraddii hore ee adeega iyo arimaha qoyska ee Soomaaliya Drs Maryan Qaasim ayaa sheegtay in la joogo waqtigii ay midoobi lahaayeen Jaaliyadaha Soomaalida ee ku dhaqan caalamka, iyadoo xustay hadii ay taasi dhacdo inay leedahay ahmiyad gooni ah, waxay ku tilmaamtay dadka Soomaaliyeed ee dibad jooga kuwa ay ka dhiman waysay Soomaaliya mudadii ay jirtay colaadaha sokeeye iyo dowlad la’aanta.
Puntlnad oo ka xun heshiis ay gashay dowladda Soomaaliya
RW Cabdi Weli: Waan kala hadlnay Kenya ineysan qaxootiga qasbin